मोतीलाल दुगड भन्छन् : म प्रधानमन्त्रीलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्छु : RajdhaniDaily.com - मोतीलाल दुगड भन्छन् ः म प्रधानमन्त्रीलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्छु
Home प्रदेश प्रदेश ३ मोतीलाल दुगड भन्छन् : म प्रधानमन्त्रीलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्छु
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै दुगडले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘मैले १३ महिना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको रुपमा काम गरेको छु । यो मन्त्रालयमा काम गरेवापत मैले धेरै प्रशंसा पाएँ ।’ महामारीको बेलामा मन्त्रालय र्याकिङमा नम्वर वानमा परेको उनको भनाई थियो । ‘यो थाहा पाउँदा खुशी लाग्यो । हामीले एकदम ईमानदार भएर र पारदर्शी ढंगले काम गरेको हो । भीजन र कन्फिडेन्स भएको र विल पावर भएकोले राम्रो काम गरें । भीन्न फेस भएको व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सकेको कुरा भयो ।’ उनले भने ‘हाम्रो कामले जनतामा राहत भयो । निजी क्षेत्रको लागि पनि राम्रो प्रतिक्रिया हो । हाम्रो मन्त्रालय भनेको निजी क्षेत्रको प्यारेन्ट्स हो । हामीले काम गर्ने सिस्टम चेन्ज गर्यौं । दुई दिनमा काम गर्ने वातावरण बनायौं । बढिमा तीन दिनमा काम गरिदिनेगरि नयाँ प्रणालीले काम सुरु गर्यौं । नीति पनि त्यहीअनुसार बनायौं । सबै सचिव, सहसचिवले सहयोग गर्नुभयो ।’
उहाँले मलाई अहिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ, युवराज खतिवडाको पोष्टमा ल्याएर बसाउनुभएको छ । देशको विकास र समृद्धिको लागि के–के गर्न सकिन्छ ? म सँधैं गर्न तयार छु
कालो बजारी हुन दिएनौं
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिएको दावी गरे । उनले भने,‘हामीले प्याण्डेमिकको समयमा घर–घरमा खाद्यान्न पुर्यायौं । हामीले कालोबजारी हुन दिएनौं । राहत वितरणहरु पनि गर्यौं । हामी एक दिन पनि घरमा बसेनौं । रातदिन काम गर्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमोट गरेर अहिले मलाई आँफैसँग राख्नुभयो । मैले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभयो । पफर्मेन्स राम्रो भयो भनेर भन्नुभयो । अहिले जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, मैले यसलाई गम्भीर चूनौतिको रुपमा लिएको छु ।’
समृद्धि निजी क्षेत्रको हातमा
उनले निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्सहान, पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास आयोजना अघि बढाउने आफूहरुको मुख्य योजना रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीसँग धेरै राम्रो फ्युचर छ । अहिले राजनीतिमा अलिकति तरलता आएको छ । यसले विकासमा कुनै अवरोध हुँदैन् । यो राजनीतिक तरलता भैरहन्छन् । यो नियमित प्रक्रिया हो ।’ प्रधानमन्त्री सजिलो व्यक्ति भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले ताजा जनादेशमा जान्छु भनेको बताए ।
उनले चुनावबाट कोही पनि डराउनु नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘आफ्नै साथीहरुले हठ प्रयोग गरेर । प्रममाथि विभिन्न चार्जहरु लगाईयो । बरु, उहाँले चूनौति दिनुभयो–एउटा पनि आरोप प्रमाणित गरे जस्तोसुकै सजाय भोग्छु भन्नुभयो । चार्ज लगाएरमात्रै हुँदैन् । त्यो प्रमाणित हुनुपर्यो । दुई तिहाईको सरकारलाई विस्थापित गर्न खोजियो । पाँच वर्षसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने सुविधा र बहुमत थियो, तर उहाँले चुनावमा जाने निर्णय गर्नुभयो । जनताको मत लिने कुरा त राम्रो हो ।’
उनले आफू पनि प्रधानमन्त्रीको साथमा उभिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘उहाँले मलाई अहिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ, युवराज खतिवडाको पोष्टमा ल्याएर बसाउनुभएको छ । देशको विकास र समृद्धिको लागि के–के गर्न सकिन्छ ? म सँधैं गर्न तयार छु ।’
मोतीलाल दुगड भन्छन् ः म प्रधानमन्त्रीलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्छु
राहत कुर्दै पर्यटन व्यवसायी
विजय नेपाल - May 2, 2020
पोखरा । लगातार लकडाउन ४० दिन नाघिसकेको छ । यसबीचमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धराशयी बनेको छ । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले भने आगामी आवको बजेटमा राहत...
पर्यटकको संख्या घट्यो
Not-to-be-missed मधुजंग पाण्डे - February 11, 2020
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित शुभारम्भ गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो महिना (जनवरी)मा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या घटेको...
बिचार श्यामप्रसाद मैनाली - June 8, 2020
Breaking News राजधानी समाचारदाता - August 26, 2020
राँझा । बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट गए राति एक ३७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । दुवै फोक्सोमा निमोनिया भएपछि शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना भएका...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - April 10, 2020
काठमाडौं । रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा स्थगित भएको छ । यो जात्रा ललितपुरमा गरिने सबैभन्दा लामो रथयात्रा हो । यो जात्राका लागि रथ...